Isiseko se-OS 6 "Odin" sifika senziwe ngokutsha, utshintsho olukhulu kunye neempawu ezininzi ezintsha | Ubunlog
Isiseko se-OS 6 «Odin» ifike yenziwa ngokutsha, utshintsho olukhulu kunye neempawu ezininzi ezintsha
Ukuphehlelelwa kwenguqulelo entsha ye Elementary OS 6 Odin efika ihlengahlengiswe ngokupheleleyo kwaye yazisa iinguqu ezininzi ezibalulekileyo, kunye nokubamba kwezinto ezintsha kwinkqubo.
Kulabo abangaqhelananga nolwabiwo, kufuneka bazi ukuba luzimisile njengendawo ekhawulezayo, evulekileyo neyimfihlo yabucala kwiWindows nakwiMacOS. Eyona nto iphambili kugxilwe kuyo yile projekthi kuyilo olusemgangathweni, olujolise ekudaleni inkqubo ekulula ukuyisebenzisa esebenzisa izixhobo ezincinci kwaye ibonelele ngesantya esiphezulu sokuqalisa.
1 Ezona mpawu ziphambili ze-OS 6 yokuqala
2 Khuphela i-OS yesiSiseko 6
Ezona mpawu ziphambili ze-OS 6 yokuqala
Kule nguqulo intsha, inani elikhulu lotshintsho lenziwe kwinkangeleko yenkqubo kwaye eyona ibalulekileyo esinokuyifumana kukuba ekuqaleni i-installer isebenzisa ujongano olutsha unikezela ujongano olulula kwaye ngokukhawuleza okukhulu ngaphezu kwesifakeli se-Ubiquity esetyenzisiweyo ngaphambili.
Kwifakelo entsha ye-Elementary OS 6, lonke ufakelo luphathwa ngokufanayo kufakelo lwe-OEM, Oko kukuthi, i-installer inoxanduva lokukopa inkqubo kwi-disk, kwaye onke amanye amanyathelo oqwalaselo, njengokudala abasebenzisi bokuqala, ukumisela uqhagamshelo lwenethiwekhi, kunye nokuhlaziya iipakeji, zenziwa ngexesha lokuqala ukuqala ngokubiza isixhobo sokuqala soqwalaselo.
Kwicala lenkqubo, sinokufumana ifayile ye- uhlaziye ngokupheleleyo isitayile esibonwayo, apho zonke izinto zoyilo zicociwe, imilo yezithunzi itshintshiwe kwaye iikona zijikeleziwe windows, kunye nokuseta okungagqibekanga kwenkqubo yefonti yi-Inter, elungiselelwe abalinganiswa benkcazo ephezulu xa iboniswa kwizikrini zekhompyuter.
Olunye utshintsho kwinkangeleko yile ukukwazi ukukhetha umxholo omnyama kunye nombala ogxininisayo, emisela umbala womboniso wezinto ezinonxibelelwano ezinje ngamaqhosha, amaqhosha okhetho, imihlaba yokufaka, kunye nemvelaphi xa kukhethwa umbhalo. Oku kunokwenziwa kwi "Useto lweNkqubo → i-Desktop → Inkangeleko". "
Kwakhona Inkqubo yokubonisa izaziso yenziwe ngokutsha, apho ku Ngokuizicelo zinakho ukubonisa izikhombisi kwizaziso Ukubonisa ngokubonakalayo imeko kunye nokongeza amaqhosha kwizaziso zokucela isigqibo ngaphandle kokuvula usetyenziso ngokwalo.
Kwelinye icala, i Inkxaso yokuthinta okuninzi kulawulo lwesandla ngokusekwe kukuchukumisa okuninzi ngaxeshanye kwipaneli yokuchukumisa okanye kwiscreen sokuchukumisa. Kwi -apps, ukuswayipha iminwe emibini kunokusetyenziselwa ukukhansela izaziso okanye ukubuyela kwimeko yangoku. Ukuqwalasela izimbo zomzimba oku kwenziwa ukusuka ku "Uqwalaselo lweNkqubo → Imouse kunye nepaneli yokuchukumisa → Izimbo zomzimba" kwisilungisi.
Kukwindawo yokuqala ye-OS 6 ukulungiselela ukufikelela kwezixhobo ezingaphandle kwesikhongozeli, kusetyenziswa inkqubo yokungena, efuna ukuba isicelo sifumane iimvume ezicacileyo zokufikelela iifayile zangaphandle okanye ukumilisela ezinye usetyenziso.
Uyilo lweZiko lokwazisa luhlengahlengisiwe ukwenza izaziso zeqela ngokusetyenziswa kwesicelo kwaye ungeze amandla okulawula usebenzisa izimbo zomzimba ezininzi, njengokufihla isaziso ngokuswayipha iminwe emibini.
Zonke izicelo ezongezelelweyo enikelwe ufakelo ngeAppCenter, kunye nolunye usetyenziso olungagqibekanga, Zipakishwe kwifomathi yeflatpak kwaye ziqhutywa zisebenzisa isanti yodwa ukuvimba ukufikelela okungagunyaziswanga kwimeko apho inkqubo iphazamisekile.
Kwiphaneli, xa ujikeleza ngaphezulu kwezalathi, umboniso weengcebiso zomxholo uyenziwa, ukwazisa malunga nemowudi yangoku kunye nendibaniselwano yolawulo ekhoyo.
Zabanye utshintsho olubonakalayo:
Imemori yenqanaba lokusondeza inikezelwe kwithebhu nganye.
Iqhosha lokuqalisa kwakhona isithuba longezwe kwimenyu yokuma.
Ukongezwa kovavanyo lokwakha lwePinebook Pro kunye neRaspberry Pi.
Umsebenzi owenziweyo wenziwe. Ukuncitshiswa kokufikelela kwidiski kunye nokunxibelelana okungcono phakathi kwezinto zedesktop.
Gqibela ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga nale nguqulo intsha Inkqubo, ungakhangela iinkcukacha kwisithuba sokuqala. Ikhonkco yile.
Khuphela i-OS yesiSiseko 6
Ekugqibeleni, ukuba ufuna ukukhuphela kunye nokufaka olu nikezelo lweL Linux kwikhompyuter yakho okanye ufuna ukuyivavanya phantsi komatshini obonakalayo. Kufuneka uye kwiwebhusayithi esemthethweni yokuhambisa kwaye kwicandelo lokukhuphela unokufumana umfanekiso wenkqubo.
Ukukhuphela simahla kwiwebhusayithi yeprojekthi, ngenisa u-0 ebaleni nemali yenkxaso. Ungasebenzisa i-Etcher ukugcina umfanekiso kwi-USB.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Isiseko se-OS 6 «Odin» ifike yenziwa ngokutsha, utshintsho olukhulu kunye neempawu ezininzi ezintsha
Enkosi kodwa hayi. Ubuntu uhlala eyinika iwaka jika ngandlela zonke. Kodwa ungatsho ukuba abafana abasaqalayo benze umsebenzi omkhulu.
Molo! Emva kwebhetri yovavanyo olukhawulezileyo (kwaye hayi ngokukhawuleza) kufakwa ngqo kwi-M2 disk (akukho matshini oqinisekileyo), ndiza kubona endinokukufumanisa. Ekuqaleni ukubonakala kokuqala kuyamangalisa. Umdibaniso wobugcisa owenziwe liqela eliQalayo, ngaphandle kwamathandabuzo, uyamangalisa (ubuncinci kwincasa yam) kudityaniso olubonakalayo lwazo zonke izinto zalo.
Ukuqhubela phambili kwizinto ezithile, eyona nto intsha kukucwangciswa kwepadspad / mousepad. Ndimele nditsho ukuba khange ndiyiphose imouse nganye ukusukela kwinto yokuthambeka phakathi kwe-1 kunye neminwe emi-4 enokuqwalaselwa ngokupheleleyo, ngaphandle kwamathandabuzo, kukulandela umkhondo ngokugqibeleleyo okwenza ukuba iMac trackpad ibonakale.
Umxholo wezilumkiso zesicelo ukwadityaniswe kakuhle kakhulu, nokuba kungokulumkiswa kwenkqubo okanye ngokwasicelo ngokwazo, kwaye le nto ingumxholo ophambili yi "Ungaphazamisi" Imo ehlala iluncedo.
Elinye inqaku endizamile kukudityaniswa kwepaneli yomculo ekhawulezayo, efanelekileyo kakhulu ekusebenzeni namaqhosha avela kwipaneli yokulawula ephezulu ngaphandle kokuya kumdlali.
Qaphela: kukho abantu ababenengxaki yemizobo (glitches) kodwa, kwimeko yam, akukho.
Ngoku kuza izithunzi, kwimeko yam zimbalwa, kodwa zichaza ngokucacileyo. Kuqala ingxaki yam ephambili yayikukuba ivenkile yesicelo sayo ayinanto, kwaye ukuthi akukho nto ayonelanga. Izicelo ezihlanganiswe kwiFlatpak zilungile, kodwa nantsi ingxaki.
Ukuba sisiseko soBuntu, kutheni ungabonisi indawo yogcino Ubuntu kunye nezo ziQalayo? Into efana no-Ubuntu Mate iyenza, engafaniyo ukuba akukho mizekelo. Okanye enye into enokuthi yenzeke kukuba, ukuba zizicelo kwifomathi yePlppak, kutheni ungadibanisi indawo ekugcinwa kuyo iFlatHub? Ngenxa yoku akukho luvo.
Inqaku lesibini ngokuchasene nokuthatha kwakhona isiQinisekiso sisekwe ku-Ubuntu, kutheni le nto umfakeli womqhubi welungelo lokungena engezi ngokungagqibekanga? Oku kubonakala kusisiseko kum njengevenkile yeapp kunye (okanye ngaphandle) kweeapps (?). Ngapha koko ndafaka isifakeli somqhubi ngeGnome Software, ekucacileyo ukuba, kwafuneka ukuba ndifake kwilayini yomyalelo (sudo apt ukufaka gnome-software), kuba kwivenkile yokuqala, ewe, khange ivele.
Ngapha koko, uhlalutyo oluncinci endiye ndakwazi ukulwenza emva kweeyure ezimbalwa zovavanyo kwaye ndiyazi ukuba kule meko bobabini umba wevenkile kunye nomfakeli womqhubi uya kusonjululwa. Into ebonakala isisiseko kwaye ingenangqondo kuthathelwa ingqalelo ukuba bayakhuthaza ukusetyenziswa kokufakwa emva kokufakwa (ngaphandle kwebhokisi), okanye bacinga njalo.
Ayizizo zonke izinto ezimbi, njengoko ndisitsho. Ukusebenza ngokugqwesileyo, nangona ndingenakuba nenjongo kuba ndiyivavanya nge-M2 SSD kwaye iyabhabha, ukusetyenziswa kwayo kulula, yonke into intle kwaye idityaniswe kakuhle ... Kodwa ezo zinto zimbini zingaphumeleliyo ndizithatha njengezisisiseko.
Ndiyathemba ukuba olu hlolisiso lufutshane luya kunceda abo balifundileyo. Ndiyakukhuthaza ukuba uzame le nkqubo, ndiyathembisa ukuba iyamangalisa, kodwa kum oko kuyaqhwalela kuba zombini ezi zinto zibalulekile kum.
Emva kokubhengezwa kathathu, i-KDE Gear 21.08 ifika inemisebenzi emitsha yokuseta kweprojekthi yeeapps
I-Terminalpp, isigxina kunye nesiphelo sendlela yesiphelo